चर्काे घाममा लट्ठी टेक्दै जेष्ठ नागरीककाे घरदैलाे, नाच्दै गाउँदै एमालेकाे प्रचार - Ganatantra Online
दंगीशर । एमालेको प्रचार देख्दै रमाईलो लागेको थियो । बैशाख महिनाको चर्काे घाममा उमेरले तिन बिस काटिसकेका जेष्ठ नागरीकहरु एमालेको प्रचारमा सहभागि भए । उनीहरु न घाम भने न त पानी । कुनै चिजको प्रवाह थिएन । थियो त केवल एमालेलाई जिताउँने अभियान । “मै पनि एमाले सै पनी एमाले ” गित बजिरहेको थियो ।
ती जेष्ठ नागरीकहरु कोहि थपडि बजाउँदै रमाउँन थाले कोहि लट्ठो टेकि टेकि नाच्न थाले । सबै उनीहरुप्रती आकर्षित भए । चुनावी घरदैलो ती जेष्ठ नागरकिहरुले मनोरञ्जनमय भईदियो । युवाहरु झनै त्यसैमा के कम सबै नाच्न अनी रमाउँन थाले । “नाचम नाचम हामीलाई पाल्ने एमाले हो नत्र घर न घाट का हुन्थिम । कसले पाल्थ्यो र ? एक ७० काटेका बृद्धले भने । यो दृश्य देख्दा यो देशका हरेक जेष्ठ नागरीकहरु एमालेलाई नै चाहेको प्रष्ट हुन्थ्यो ।
जेष्ठ नागरीकहरुको विचल्ली हुन थालेपछि एमालेको सरकारले जेष्ठ नागरीकहरुको बाच्न पाउँने अधिकारलाई सुनीश्चित गर्दै वृद्ध भत्ताको ब्यवस्था गरेको थियो । बृद्ध भत्ता पाउँन थालेपछि उनीहरुमा बाच्ँन सक्ने शक्ती प्राप्त भएको थियो ।
याे चुनावी अभियानको दृश्य दंगीशरण गाउँपालिका वडा न. २ को हो । वडा न. २ का वडा अध्यक्षका उम्मेद्धार डम्वर खत्री किसानी परिवारका हुन् । २०४६ सालदेखि एमालेको सक्रीय कार्यकर्ता भई हिडेका खत्री जनताको दु.खलाइृ नजीक बाट नियालेका छन् । आजको चुनावी अभियान वडा न. २ को वंगालपुर, सरुवाडाँडा, डवरा गाउँ लगाएतका टोलहरु सम्पन्न भएको छ ।